Howlgallo Khasaare Dhaliyay Oo Ka Kala Dhacay Jubbada Hoose Iyo Bakool. – Bogga Calamada.com
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan jamhadda Mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada Jubbooyinka waxay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Kenya ay ka samaysteen deegaanka Taabto ee gobolka Jubbada hoose.
Weerarka oo ahaa mid xooggan waxay Mujaahidiintu ku mireen saldhiga ciidamada dowladda Kenya ee ay ka samaysteen deegaanka Taabto oo dhowr KM u jira deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in uu jiro khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo dagaalkaasi lagu gaarsiiyay ciidamada Kenyaatiga ee xabadda Mujaahidiinta ku sugaya difaacyada deegaanka Taabto.
Dhanka kale ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ee ka howlgala wilaayada Bakool sacaadihii aan kasoo gudubnay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed ay ka samaysteen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Jabaqda rassaasta iyo deryanka madaafiicda dagaalka waxaa si wayn looga maqlayay xaafadaha degmada Xudur waxaana jira khasaare kala duwan oo ciidamada maamulka Riddada Koonfur galbeed lagu gaarsiiyay dagaalkan.
Howlgalladan jihaadiga ah ee ka kala dhacay deegaamada dhaca wilaayaadka Jubooyinka iyo Bakool waxay kusoo beegmayaan xilli uu lixaadsaday halganka jihaadka ee lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa kabaqaadka u ah ee murtadiinta.